तपाईंको स्टार्टअप ब्यापारका लागि लगानी प्राप्त गर्न शक्तिशाली विधिहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
अप्रिल 12, 2021 अप्रिल 11, 2021 गौरव शर्मा ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार
तपाईको व्यवसायमा फन्ड गर्न को लागी कसैलाई पनि भेट्न सजिलो हुँदैन।
उत्तम विकल्पहरू जुन तपाईं आफ्नो स्टार्टअप ब्यापार वित्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो बचत, पार्टनर अप, एभरेसल इन्भेस्टमेन्टहरू, वा क्राउडफन्डि use प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको स्टार्टअपलाई फाइनेन्स गर्न यो चुनौतीपूर्ण तरीका हो किनभने सीमित संसाधनहरूले तपाईंको उत्पादन वा सेवाको गुणस्तरलाई बिगार्न सक्छ।
यद्यपि, यो रकम प्राप्त गर्न असम्भव छैन। तर कसरी तपाइँ तपाइँको सजिलै तपाइँको स्टार्टअप व्यवसाय को लागी स्रोत लगानी गर्न सक्नुहुन्छ? तल खोज्नुहोस्।
उत्तम विकल्पहरू जुन तपाईं आफ्नो स्टार्टअप ब्यापार वित्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
तपाईं कसरी लगानीकर्ताहरूको लागि स्काउट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा जानु अघि हामी तपाईंलाई आवश्यक भएको एउटा पूर्व आवश्यक छ। एक व्यवसाय योजना को लागी तपाइँलाई यो साबित गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाइँसँग लाग्ने एक ब्यापार विचार छ। रूपरेखा यसलाई तपाइँ तपाइँको विचार को एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त गर्न को लागी र प्राप्त गर्न अघि कुनै पनि मुद्दाहरु फेला पार्न अनुमति दिन्छ अगाडि व्यापारमा.
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा? यसले तपाइँलाई तपाइँको सुरूवात ब्यापारको लागि पर्याप्त लगानी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तर के व्यापार योजना संलग्न हुन पर्छ? यसले वर्णन गर्दछ कि तपाईं को हुनुहुन्छ, तपाईंको व्यवसाय उद्देश्यहरू, तपाईं कुन उत्पादन वा सेवा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, तपाईं कहाँ अपरेट हुनुहुनेछ, तपाईंको मिशन कथन, र तपाईंको उद्योग।
अरु के छ त? तपाईंको योजनाले तपाईंको लक्षित दर्शकहरू, प्रतिस्पर्धीहरू, बजेट, वित्तीय अनुमानहरू, र शक्ति संरचनाको रूपरेखा पनि बनाउनेछ। यसका लागि, गहन बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्नुहोस् कुन पीडा पोइन्टले तपाईलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ र जसलाई तपाइँ लक्षित गर्नुहुन्छ।
थप रूपमा, लाभ विश्लेषण उपकरण कि प्रतिस्पर्धीहरु को विरुद्ध तपाइँको व्यवसाय को बेंचमार्क कि उनीहरु को हुन्, तिनीहरूलाई के फरक छ, र तपाइँ कसरी बाहिर खडा गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई माथि राख्नको लागि, व्यावहारिक वित्तीय अनुमानहरू परिभाषित गर्नुहोस् जसले तपाईंको सुरूवात व्यवसायको लागि पर्याप्त लगानी पाउने संभावना बढाउन सक्छ। र त्यसोभए, तपाइँको व्यापार योजना तैयारको साथ, यी रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँको स्टार्टअप ब्यापारको लागि फाइनेन्स प्राप्त गर्न:
१. आफैमा लगानी गर्नुहोस्
तपाईंको स्टार्टअप ब्यापारको लागि पहिलो लगानी व्यक्तिगत बचत वा पहिले नै बनाइएको बिक्रीबाट हुनुपर्दछ, यो प्रक्रिया बुटस्ट्र्यापिpping भनेर चिनिन्छ।
यद्यपि यसले सबै व्यापार निर्णयहरूमा पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ। तपाइँको सबै ऊर्जा पनि तपाइँको कल्पना को तरिका मा तपाइँको उत्पादन को महान बनाउन मा लगानीकर्ताहरु को दबाव बिना।
२. साथी र परिवारलाई लगानी गर्न सोध्नुहोस्
साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू तपाईंको स्टार्टअपको लागि उत्कृष्ट लगानी स्रोत हुनसक्दछ किनभने तपाईंले ब्याजको साथ पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन वा यसलाई बिलकुल फिर्ता दिनुहुन्न।
यदि तपाईंलाई आफ्नो स्टार्टअप व्यवसायको लागि सानो लगानी आवश्यक छ भने, तपाईं aण लिन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि यस प्रकारको कोषसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जोखिम यो हो कि पैसा हराउँदा अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारिवारिक पुनर्मिलन वा साथीहरूसँगको सम्बन्ध हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, परिवार र / वा साथीहरूबाट लगानी प्राप्त गर्न तपाईंलाई अतिरिक्त कडा परिश्रम गर्न प्रेरित गर्न सक्छ र तिनीहरूलाई निराश नहुन सक्छ।
A. एक Getण प्राप्त गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई आफ्नो स्टार्टअप व्यवसायको लागि सानो लगानी आवश्यक छ भने, तपाईं aण लिन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं संस्थाबाट एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, समावेश सहित सानो व्यवसाय प्रशासन। तिनीहरूको कार्यक्रमले तपाइँलाई निजी ndणदाताहरू र माइक्रो-उधारो नफारहितहरूको loansणसँग जडान गर्न सक्छ।
यद्यपि, आवेदन र अनुमोदन प्रक्रिया धेरै लामो लिन सक्दछ र चुनौतीपूर्ण साबित हुन सक्छ यदि तपाईंलाई तत्काल वित्तिय आर्थिक आवश्यकता छ भने। यस अवस्थामा, तपाईले अन्य अनलाइन माइक्रो-ndणदाताहरू, निजी संगठनहरू, लगानीकर्ताहरू, बैंकहरू, र एसोसियसनहरू लाभांश गर्न सक्नुहुनेछ जसले योग्य सुरुआतहरूलाई माइक्रो loansण दिन्छ।
जे होस्, सम्झनुहोस् वा जोड्न वा तपाइँको ब्यापार कैरी बजार योजना जब तपाईंलाई यी माइक्रो-लेन्डरहरू मध्ये कुनै एकलाई लागू गर्न वा भेट्न आवश्यक पर्दछ। यस तरीकाले, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन कि तपाईंको सुरूवात उनीहरूको लगानीको लागि योग्य छ।
Le. लिभरेस क्रोडफन्डिund
क्राउडफन्डि Withको साथ, लगानीकर्ताहरूको पोखरीले थोरै मात्रामा पूंजी योगदान गर्न सक्दछ र तपाईंको स्टार्टअप ब्यापारको लागि लगानी प्रदान गर्न सक्दछ। तपाईं मा व्यक्तिहरूको विशाल नेटवर्क लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ सामाजिक संजाल र क्राउडफन्डि websites वेबसाईटहरू जस्तै किकस्टार्टर, फन्डेबल, क्रोडफन्डर, र अन्य।
जे होस्, तपाईले यी मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ कि तपाईको स्टार्टअप ब्यापारका लागि लगानी प्रदान गर्न तपाईलाई यो दर्शाएर कि तपाईको विचार उनीहरूको पैसाको योग्य छ। यस मुद्दालाई समाधान गर्न तपाईंले एउटा सिर्जना गर्नु आवश्यक छ राम्रो प्रस्ताव राम्रोसँग वर्णन गरिएको ढाँचा प्रयोग गर्दै।
Ac. एक एक्सेलेटर प्रोग्राममा शामिल हुनुहोस्
एक्स्लेरेटर प्रोग्रामहरू जस्तै Y Combinator, Techstars, र MassChallenge तपाइँको स्टार्टअप ब्यापारको लागि पर्याप्त लगानी प्राप्त गर्न उत्तम तरिका हो।
जहाँसम्म, योग्य हुन, तपाईसँग या त नि: शुल्क उपयोगकर्ताहरू, केहि भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरू, वा यो उत्कृष्ट बजार फिट रहेको संकेतहरूको साथ एउटा उत्पादन हुनुपर्दछ। धेरै जसो यी एक्सेलेटर प्रोग्रामहरूले केवल केहि व्यवसायहरू स्वीकार गर्दछन् र तपाईंको इक्विटीको एक प्रतिशतको लागि पूंजी प्रदान गर्दछ।
तर त्यसले तपाईलाई रोक्दैन। एकचोटि स्वीकृत भएपछि, तपाईं लगानीकर्ताहरू र अनुभवी संस्थापकहरूको निजीकृत मार्गदर्शनको पहुँच पाउनुहुनेछ। यसले तपाईंलाई सहयोगी र अन्य नवीन स्टार्टअपहरूको साथ साझेदारी गर्न अवसर प्रदान गर्दछ।
A. एक रणनीतिक पार्टनर खोज्नुहोस्
पार्टनरशिप तपाईको स्टार्टअप ब्यापारका लागि सबै भन्दा राम्रो लगानी हुन सक्छ किनभने यसले चीजहरू दक्षिणमा जान्छ भने यसले तपाईंको दायित्व कम गर्छ।
सबै भन्दा राम्रो? तपाइँको ज्ञान र कौशलको संयोजनले नवीन विचारहरू, मुद्दाहरूको द्रुत समाधानहरू, र तपाइँको स्टार्टअप बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
यद्यपि तपाईको स्टार्टअप ब्यापारको लागि लगानीको खोजीमा साझेदार गर्न त्यहाँ बेफाइदाहरू छन्। एकको लागि, तपाईले आधा वा मुनाफाको एक तिहाइ प्राप्त गर्नुहुनेछ, कति कति पार्टनरहरू गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। दोस्रो, यसले धेरै असहमति र द्वन्द्व निम्त्याउँछ जुन स्टार्टअपको विफलतामा पुग्न सक्छ।
तपाइँको स्टार्टअप ब्यापारको लागि लगानी प्राप्त गर्ने अर्को तरिका होशियार लगानीकर्ताहरूलाई तपाइँको कम्पनीको सेयर खरीद गर्नका लागि।
Ange. एन्जेल लगानीकर्ता र उद्यम पूंजीवादीसँग काम गर्नुहोस्
एन्जेल लगानीकर्ताहरू प्राय: पूर्व उद्यम पूंजीपति वा उद्यमी हुन् जसले तपाईंको ब्यापारको राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावनाबाट प्रेरित हुन्छन्। उनीहरूले सल्लाह प्रदान गर्न वा समुदायलाई फिर्ता दिन पनि चाह्न सक्छन्, र तपाइँले उनीहरूलाई एन्जललिस्ट भेन्चर जस्ता नेटवर्कमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई व्यक्तिगत जडान वा वित्तीय सल्लाहकारहरू मार्फत पनि खोज्न सक्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, उद्यम पूंजीपतिहरूसँग अधिक संरचना छ र अधिकतर फर्महरू हुन् जुन स्टार्टअपमा लगानी गर्न मद्दत गर्दछन्। तिनीहरू अधिक नियन्त्रणको माग गर्दछन्, केवल व्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, र अधिक अवस्थामा अधिक पूंजी दिन्छन्।
माथि देखाईए अनुसार, तपाईंसँग बिभिन्न विकल्पहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो स्टार्टअप व्यवसायको लागि स्रोत लगानी गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र सफल उद्यमी बन्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो बचत, पार्टनर अप, एभरेसल इन्भेस्टमेन्टहरू, वा क्राउडफन्डि use प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जे होस्, याद गर्नुहोस् एक ध्वनि व्यवसाय योजना र यथार्थवादी वित्तीय अनुमानहरु लाई लगानीको लागि मनाउन। के तपाईंलाई सहयोगका लागि सहयोग चाहिन्छ? पर्याप्त लगानी तपाइँको सुरुवात व्यवसाय को लागी? सम्पर्कमा रहनुहोस्, र हामी तपाईंको व्यावसाय विचारको आधारमा अनुकूल सल्लाह प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
ब्यापारस सुरुवात सांप्रदायिक समाचार कोष स .्कलन लगानी समाचार स्टार्टअपहरू
संस्थापक एट्रोक | डिजिटल मार्केटिंग गुरु | उसले शीर्ष मार्केटिंग प्रभावकारीहरूको साथ नजिकबाट काम गर्दछ र धेरै ब्रान्ड, ईकमर्स फर्महरू, र सास कम्पनीहरूको बढ्नमा मद्दत गरेको छ।